Iminyaka eyi-12 ku-Professional Design - NBC Electronic Technologic Co, Ltd.
Sithathe isixazululo seminyaka eminingana kumkhiqizo wamazwe omhlaba
Kusuka ku-HOUD kusungulwe, hlala uqonde kumakhasimende, gxila kwikhwalithi njengezimpande, uthuthukise futhi uvuselele ngokuqhubekayo, ngaphansi kweminyaka eminingi ukusebenza kanzima kwesisebenzi, inkampani yamazwe ivuma imikhiqizo yethu, qhubeka ukhula ngamanani amadijithi aphindwe kabili njalo ngonyaka.
Nikeza isixazululo nensizakalo kumkhiqizo we-premium omhlaba jikelele okwamanje, ngesixhumi: State Grid Corporation of China, Eaton, Delta, HuaWei, Emerson, Philips, TCL njll, i-electro-acoustic hardware: Bose, JBL / AKG, Sennheiser, Sony njll. .
Sibamba iqhaza ekwakhiweni kwamakhasimende, sinikeze umbono nesipiliyoni sobungcweti, okwamanje impendulo esebenzayo, sisebenzisa ukuqinisekiswa kwemibono ehlukile yekhasimende, sinikeze ngomkhiqizo osezingeni eliphakeme.
Umkhiqizo odumile embonini, i-patent30 +, ibhizinisi lobuchwepheshe be-Hi-tech
I-Houd inikezela ngesixazululo esiphakeme samanje sokuxhuma nesisombululo se-electro-acoustic, hlonipha impahla ebhaliwe, futhi unake nokuqanjwa kobuchwepheshe obusha, irejista uphawu lokuhweba lwemikhiqizo kusukela ekusungulweni: ANEN, ngabo bonke abasebenzi abasebenza kanzima, emashumini eminyaka asathuthuka, ikhasimende ligunyaza umkhiqizo wethu kancane kancane , isicelo samandla we-UPS, isikhungo sedatha nesiphakeli, amandla kagesi, isiteshi sezokuxhumana, ezishintshayo zezimboni, idivaysi yezokwelapha, amathuluzi kagesi, ithrafikhi yezimoto, ezokumaketha nezokungena, idokhu, ezokuvikela umoya, ezezimayini, ezomsindo nezimboni zezindlebe. Kuze kube manje, inkampani iphethe ilungelo lobunikazi elingama-40 +, elihlonishwe inkampani kazwelonke ye-Hi-tech yesayensi nobuchwepheshe. Ngokusekelwa okukhulu kwamakhasimende avela ezimbonini ezahlukahlukene, sonke isisebenzi sizoba njengenjwayelo, sivuselele okuqhubekayo, impendulo endala nekhasimende elisha umusa omkhulu.
Ifektri eyakho imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme kanye neworkshop yesimanje, ukwakheka nenqubo yokukhiqiza ithuluzi.
Kuze kube manje, ekuthuthukiseni, sinikeza uchungechunge lwezixazululo kumakhasimende: Design-> Amasampula (ukuphrinta kwe-3D) -> amasampula wokuhlola / ukuqinisekiswa-> ukwakhiwa kwamathuluzi-> ukuthuthukisa-> ukukhiqizwa kwesisindo. Ngokuphathelene nemodi yokucubungula, singahlinzeka ngomjovo, ukugxishwa, ukwelulwa, i-CNC, i-MIM njll, sinolwazi olunothile kusixhumi samanje esiphakeme, i-terminal eqondile ne-electro-acoustic hardware. Inkampani ephethwe ngocingo kagesi, singaletha okuhlangenwe nakho okungcono kuwe, ngenxa yesipiliyoni seminyaka eminingi ekwakhiweni komkhiqizo nokukhiqizwa komkhiqizo we-premium wamazwe omhlaba.